Adam Small Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Adam Mudiki
Heano mamwe mabasa epamba iwe usati waverenga izvi. Ndeipi yako muzana yekutendeuka kunoitika kuburikidza nharembozha uye desktop? MuGoogle Analytics, sarudza Shanduko> Zvinangwa> Shanduko uye sarudza Mobile Traffic yeboka rako rekutanga uye Isiri-Nhare Traffic kune wechipiri: Ndeipi muzana yako traffic inoitika kuburikidza nharembozha nedesktop? MuGoogle Analytics, sarudza Vateereri> Ongororo uye sarudza Mobile Traffic yeboka rako rekutanga uye Isiri-Nhare Traffic kune wechipiri wako: Muenzaniso wandiri
Svondo, May 8, 2016 Muvhuro, June 25, 2018 Adam Mudiki
Iyo nharembozha iri kuramba ichichinja, uye vashambadzi chete vanoramba vachienderana neshanduko uye vanovaisa mumatanho avo ekusimudzira uye ekubatirana anomira mukana wekubudirira munyika yanhasi inokwikwidza. Iyo tekinoroji yazvino yekuita kuti ive yakakura iri Pedyo neMunda Kutaurirana (NFC). Chii chiri Pedyo neMunda Kukurukurirana? Pedyo neMunda Kutaurirana tekinoroji yakadzamirwa mune zvazvazvino nharembozha inobvumidza kutaurirana kwakachengeteka (pamwe nekusimbiswa) pakati penharembozha ne